Bit By Bit - Inqubomgomo futhi Imvume yemfihlo
Inqubomgomo futhi Imvume yemfihlo
Ngalolu website, senza umbhalo ophelele we bit by bit: Research Social in the Digital Age ngaphandle kweendleko. Nakuba ufunda incwadi, sisuke ekulinganiseni umfundi ukuziphatha ekuhlanganisweni. Ngokwesibonelo, thina abakumedako yiziphi izigaba sencwadi athole funda kaningi kakhulu. Le datha kuyosisiza ngcono ncwadi. Sisebenza ngokubambisana futhi egijima nemaresiphi-ngokuvamile ebizwa ngokuthi A / B izivivinyo -ukuze asisize ukuthengisa amanye amakhophi ale ncwadi. Konke esikwenzayo kuyinto evamile kumawebhusayithi zesimanje. Thina ukuchaza kabanzi ngezansi, futhi thina zizobonisa ngalokho esikwenzile futhi lokho esiye sakufunda on blog yethu .
Yiluphi ulwazi thina ukuqoqa?
Sisebenzisa Google Analytics ukuqoqa ulwazi mayelana nokuthi osebenzisa ngayo le website. Ngaphezu kwalokho, like amawebhusayithi kakhulu, sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa isipiliyoni sakho, ubuthe ulwazi isivakashi jikelele, futhi ulandelele ukuvakashelwa website yethu. Sicela ubheke "ingabe sisebenzisa amakhukhi?" kwesigaba ngezansi ukuze uthole ulwazi mayelana namakhukhi kanye nokuthi siwasebenzisa kanjani.
Noma imiphi yale imininingwane esiyiqoqayo ingase isetshenziselwe ucwaningo, ukwenza ngcono ncwadi, futhi ukusiza ukuthengisa le ncwadi.
Sisebenzisa ezihlukahlukene izinyathelo zokuvikeleka balondoloze ukuphepha kokwaziswa osinikeza.
Iningi ulwazi ukuphequlula esiye egcinwa Google Analytics , futhi ungafunda kabanzi mayelana zabo izimiso ukuphepha kanye nobumfihlo .
Isichasiselo ukuthi ungeza ziphethwe hypothes.is , futhi ungafunda kabanzi mayelana kwabo imigomo yesevisi .
Website yethu thwe ngokubambisana GitHub amakhasi , futhi ungafunda kabanzi mayelana GitHub sika imigomo yesevisi .
Yebo. Amakhukhi files amancane ukuthi isayithi noma isevisi yayo umhlinzeki ukudluliselwa drive yekhompyutha yakho hard ngokusebenzisa isiphequluli sakho sewebhu (uma uvumela) eyenza amasayithi noma abahlinzeka ngemisebenzi izinhlelo ukuba uqaphele isiphequluli sakho bese bamba bese ukukhumbula ulwazi oluthile.
Ukuze ukukunikeza kangcono site isipiliyoni, sisebenzisa amakhukhi ukuze baqonde bese ugcine izintandokazi zakho ezovakasha esizayo futhi ukuba ahlanganise idatha sesibalo mayelana site traffic.
Asazi ukudayisa, ukuhweba, noma ngenye ukudlulisa amaphathi ngaphandle ulwazi lwakho okhonjwa ngaphandle omethembayo besithathu ngubani usisize ekuqhutshweni website yethu, ucwaningo, noma isevisi kuwe, inqobo nje uma lawo malungu livume ukugcina lolu lwazi oluyimfihlo . Singase futhi ukudedela ulwazi lwakho uma sikholwa ukukhululwa kuyafaneleka ukuba athobele umthetho, ukuphoqelela site yethu, noma ukuvikela eyethu noma amalungelo abanye, impahla, noma ukuphepha.
links Umuntu wesithathu
Ngezikhathi ezithile, ngokubona kwethu, singase amalinki wesithathu amawebhusayithi. Lezi zingosi third party anezinqubomgomo zobumfihlo ahlukene futhi azimele. Ngakho-ke, yiba akukho umthwalo noma yimaphi okuqukethwe kanye nemisebenzi kwalezi amasayithi ahlobene nathi ngenxa. Noma kunjalo, sifuna ukuba avikele ubuqotho site yethu futhi ukwamukela noma iyiphi impendulo mayelana kulezi zingosi.
Ngokusebenzisa site yethu, uvumela ukuba yobumfihlo yethu.
Uma unemibuzo, sicela usithumelele i-email info@bitbybitbook.com .
Izinguquko Inqubomgomo yethu futhi Ukuvuma yemfihlo
Sinelungelo ukushintsha yemfihlo yethu ngezikhathi ezithile ngokubona wethu yedwa. Sicela ngezikhathi uhlole le ngxenye ukuze ubuyekeze version wamanje Inqubomgomo futhi Ukuvuma Yemfihlo. Zonke izinqubomgomo zethu odlule ethulwa ngezansi, futhi sizoqhubeka ukubuyekeza leli khasi uma kudingeka noma yiziphi izinguquko.